Kungani abantu bekhetha uSemalt
Abanye abanikazi bewebhusayithi bacabanga ukuthi ngosizo lwemibhalo eyingqayizivele, izingosi zabo bezizofinyelela isikhundla esiphakeme kunjini yokusesha. Bacabanga ukuthi amagama angukhiye azokwandisa ukubukwa kwewebhusayithi, ngakho-ke ikhefu elikhulu seliseduze. Kudala inkohliso. Ukube bekunje, bekungeke kube nesidingo sangochwepheshe be-SEO abanolwazi nezikhungo ezinamandla ze-SEO. Konke kuyinkimbinkimbi kakhulu, futhi ngaphandle kochwepheshe, ibhizinisi lakho online lizokulethela udumalo kuphela. Ngaphandle kwakho konke, uSemalt uyaqhubeka nokwenza kahle kwe-SEO amawebhusayithi iminyaka engaphezu kweshumi.
Isipiliyoni esihle siyivumela ukuthi ibhekane nemisebenzi yokwanda kobunzima. USemalt wasindisa amakhulukhulu amasayithi, wawakhipha ngqo kwalasha. Ukubuyekezwa kwamakhasimende amaningi kukuqinisekisa lokhu. Ngaphandle kwalokho, ungabheka amacala kwiwebhusayithi yethu, aveza izibonelo eziyiqiniso zokuthi izindlela zethu zisebenza kanjani. Uma uthathe isinqumo sokwakha ibhizinisi elingathi sína, indlela yakho kuphela eyiSemalt. Yithina kuphela esingasiza abantu ukuthi benze imali efanelekile. Ukuchuma kwakho kusho impumelelo yethu, ngakho-ke siyakwazi ukuphumelela.
Akuyona imfihlo ukuthi uSemalt usephenduke umholi kuwebhusayithi yokwenza kahle kwe-SEO. Ineqembu elinamandla lochwepheshe bangempela abangakwazi ukwenza noma yimuphi umsebenzi. Okokuqala, yiqembu lochwepheshe be-SEO abasezingeni lomhlaba. Kufanele sikhokhe intela kubaphathi abaqeqeshiwe, ochwepheshe be-IT, abathengisi. Amafutha ohlelo lwethu lweSemalt anamandla amakhulu kwethulwe ababhali abanekhono, abaklami nabahlaziyi. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ngamunye walaba basebenzi unolwazi olukhulu lwe-SEO.
Ngamanye amagama, uSemalt angavezwa njengendlela elungiswe kahle yokwenza amawebhusayithi ngokusebenzisa ubuchwepheshe be-SEO obunqenqemeni. Manje kuba sobala ukuthi kungani uSemalt engenabo abazoncintisana nabo kule ndawo. Eqinisweni, isikhundla esiphambili seSemalt besiboshwe ngokuqinile iminyaka. Namuhla, cishe wonke umuntu uyazi ukuthi uSemalt kuphela oqinisekisa impumelelo yangempela kokukhiqizwa kwe-SEO.
I-SEO noma i-Search Optimization ivame ukusetshenziswa kakhulu ku-lexicon phakathi kwabasebenzisi be-inthanethi. Njengoba kwenzeka, akubona bonke abantu abayiqondayo injongo yangempela yalesi gama. Ngaphezu kwalokho, bambalwa abantu abaqondayo ukutolika kwayo. Sizovula ikhethini bese sichaza ukuthi kuyini. Njengoba wazi kahle, izinjini zokusesha zinikeza abasebenzisi uhlu lwamasayithi ukuphendula izicelo zabo. Amanye amasayithi aphuma phezulu kunjini yokusesha, kanti amanye atholakala ngokusebenza amakhasi ambalwa. Ukusebenziseka kosesho kwewebhusayithi kuhloselwe ukwenza isayithi lakho liye ezikhundleni eziphezulu ku-injini yokusesha. Ngakho-ke, kuphephile ukusho ukuthi i-SEO isethi yezinyathelo zokuthuthukisa isikhundla sewebhusayithi emiphumeleni yenjini yokusesha, ngokusho kwezicelo ezikhethwe ngaphambilini.
Uma, esikhathini esedlule esedlule, i-Intanethi ibisetshenziselwe kakhulu ukusesha imininingwane, namuhla isimo sehluke kakhulu. Inani elanda njalo labasebenzisi be-inthanethi, ubuchwepheshe obusha, nezinye izinto eziningi ziguqule i-Intanethi yaba yithuluzi lokumaketha elinamandla nendawo yokuthengisa. Ukuphromotha okuku-inthanethi kungasebenza kunoma iyiphi inkampani enezithameli ezingabakhona ezifuna imikhiqizo noma izinsiza ezifanayo kwi-Intanethi. Noma kunjalo, izinkulungwane zabantu zifuna imikhiqizo yakho nsuku zonke kepha zithole imikhiqizo yabaqhudelana bakho. Lokhu kungenxa yokuthi izimbangi ezisheshayo eziningi sezivele zithathe izindawo ezinhle kakhulu kwimiphumela yosesho. Ungaphuma nabancintisana nabo. Konke okudingayo ukuqala ukusebenza kweinjini zokucinga ngeSemalt.
Impela, ukwenziwa kweinjini yokucinga kuyindlela ephumelela kakhulu yokuheha abathengi, kepha kunesimo esisodwa: ochwepheshe kuphela abangakufeza. Futhi iphuzu lapha alikho eqinisweni lokuthi ukwenziwa kwe-inept kungabiza izinhlawulo kuwebhusayithi yakho. Kwesinye isikhathi inani labavakashi besayithi likhulu, kepha inani labathengi lisalokhu lingathandeki. Ukuthola imiphumela emihle kakhulu ephromoshini, udinga ukunquma uhlu lwezicelo ezinyuswayo namasu wokuphromotha. Ochwepheshe beSemalt bangenza izinqumo zamasu ezimeni ezihlukile, ngakho-ke ungazami nokuzihlela ngokwakho; esikhundleni salokho, themba inkampani ethembekile.
Izisombululo ze-Semalt SEO
Ukusetshenziswa kwe-SEO kubandakanya uhlelo lokumaketha ledijithali olufaka amasu athile ahloselwe ukukhuthaza iwebhusayithi noma uhlobo. Amasu anjalo avumela ukuthi uthole ukubonakala okwengeziwe kwi-Intanethi. I-Semalt ihlala inikezela ngezixazululo eziphelele zokusebenzisa kahle ezihlanganisa uhla oluphelele lwezenzo ezidingekayo. Umphumela ekugcineni uzoba ukwanda kokubonakala kwethrafikhi newebhusayithi. Okusebenzayo kakhulu imikhankaso ye-FullSEO ne-AutoSEO, eqinisekisa impumelelo ngesikhathi esifushane. Ekuqaleni, kufanele ucabangele iqoqo lezinyathelo ezinikezwe kule mikhankaso ukukhetha eyodwa efanelekile.
USemalt uqoke izindlela eziningi zalo mkhankaso, inhloso yawo ukubeka iwebhusayithi yakho ezikhundleni eziphezulu ku-injini yokusesha. Manje, udinga ukuba nokuqonda okuyikho kwezimiso eziyisisekelo ze- AutoSEO. Zonke izigaba zomkhankaso zenzeka ekuxhumaneni ngqo nekhasimende neqembu leSemalt. Izenzo ezihlosiwe ngokungangabazeki zizoholela emiphumeleni oyifunayo uma ulandela yonke imiyalo yabachwepheshe bethu okuhloswe ukuthi bakhuthaze isayithi lakho. I-AutoSEO ifaka imisebenzi elandelayo:
ukukhethwa kwamagama angukhiye afanele kakhulu;
Ukuqala umkhankaso we-AutoSEO, kufanele ubhalise kwiwebhusayithi yethu. Zonke ezinye izinto zenziwa ngumhlaziyi wewebhusayithi. Kuyinto elula kakhulu ngoba ukubamba iqhaza kwakho ukuthola imibiko yamanje kusayithi. I-Analyser izobheka ngokuphelele ukwakheka kwewebhusayithi ngokuya ngamazinga we-SEO. Ngemuva kwalokho, uzonikezwa umbiko wokuqala ngesimo sendawo nohlu lwamaphutha atholakele ngesikhathi sokuhlaziywa. Lawa maphutha adinga ukulungiswa ngokushesha ukuze aqhubekele phambili. Unjiniyela wethu we-SEO uzobuye futhi abukeze ukuhlaziya bese ukhetha amagama afanele. Umphumela wenqubo wenyuka ngethrafikhi yewebhusayithi.
Isinyathelo esilandelayo somkhankaso we-AutoSEO kuzoba ukukhethwa kwezixhumanisi ze-inthanethi nokuzifaka ezinsizeni ezahlukahlukene ze-intanethi. Okuqukethwe kuhlolwe ngokucophelela ukuba khona kwenani le-semantic. Ngaphandle kwalokho, kufanele ifane nezixhumanisi ezenzelwe ukufakwa. Yonke le nqubo ingaphansi kokuphathwa njalo kwemenenja yethu, ngakho-ke noma yiziphi izinsongo ezenziwa kuwebhusayithi azihlanganisiwe. Umphathi uphinde alandelele indawo yezixhumanisi enjini yokusesha futhi anqume ubungako bokusebenza kwezinsiza ngaphambi kokufaka izixhumanisi.
Besebenzisa ukufinyelela kwe-FTP (I-File Transfer Protocol) nolwazi olusuka embikweni owedlule, ongoti bakwaSemalt benza izinguquko ezidingekayo kuwebhusayithi. Ngemuva kwalezi zinguquko, ukwenziwa kwesiza kuqala ukuthuthuka. Kuwo wonke umkhankaso, uSemalt ubelokhu ebheka ukuvuselelwa kwesikhundla okungapheli, wethula amagama adingekayo. Onke amagama agqamile ayahlolwa ukuze ahambisane nokuqukethwe. Njengoba ukwazi ukubona, ukubamba iqhaza kwakho kule nqubo kuncane, kepha uhlala njalo usesikhathini nakho konke okwenzekayo esizeni. Ngokuya ngentengo yensizakalo, iphakheji yanyanga zonke ye-AutoSEO izobiza u- $ 99.
I-FullSEO iyikhwalithi ye-SEO yekhwalithi, imiphumela yayo etholakala ngesikhathi esifushane. Ngokufanayo, izinqubo eziningi zenziwa ukuthuthukisa isilinganiso sewebhusayithi enjini yokusesha. Lapha, ukwenziwa ngaphakathi nangaphandle kwenziwa ngaphansi kokuholwa uchwepheshe we-SEO. I-FullSEO ingukukhuthaza ukusebenza kwe-SEO okunikeza impumelelo engakaze ibonwe ebhizinisini online. Ngaphezu kwalokho, lo mkhankaso uzosiza ukubuyisa bonke oncintisana nabo isikhathi eside.
Umkhankaso we-FullSEO uyaqhubeka ngezigaba. Ukuze uqalise inqubo, kufanele ubhalise kwiwebhusayithi yethu. Ukuhlaziywa kwesakhiwo sewebhusayithi kuyaqala, futhi uthola umbiko onemininingwane. Ngokufakwa kombiko, isazi se-SEO sichaza umgogodla we-semantic. Ukuhlaziywa kubuye kukhombise wonke amaphutha avimba inqubekelaphambili. Amaphutha kufanele alungiswe ngokushesha, bese kuyisikhathi sokunquma amagama angukhiye. Amagama agqamile abamba iqhaza elibalulekile enqubekweni yokwenyuka kwezimoto. Ngokufinyelela kwe-FTP, uchwepheshe uzofaka kalula zonke izinguquko ezidingekayo. Lesi yisigaba sokusebenziseka ngaphakathi kwewebhusayithi.
Okulandelayo, kuzoba ukwenziwa ngaphandle kwangaphandle. Lesi sigaba sifaka ukufaka izixhumanisi kwizinsizakusebenza ze-niche. Lezi zinsizakusebenza kufanele zibonise ubunqunu bokuqukethwe kwakho. Iwebhusayithi izoguqulwa maduze nje ngemuva kokufaka lezi zixhumanisi, ngakho-ke ochwepheshe be-SEO basondela kakhulu kulesi sigaba ngokucophelela. I-Semalt isebenza ngokunenzuzo ngamasayithi amaningi aqinisekisiwe, yingakho ochwepheshe bazi ngokunembile ukuthi ungazifaka kuphi izixhumanisi zokufeza ngempumelelo. Inqubo ye-FullSEO ihlala igadwe njalo kuze kube kuphothulwa. Uhlala usesikhathini nazo zonke izinguquko esizeni. Thola imibiko enemininingwane ekukhuleni kwesilinganiso sewebhusayithi. Ngasiphi isikhathi sosuku, ungaxhumana nomuntu obhekele ezempilo kusuka kwaSemalt futhi ufune incazelo efanele.
Akunasizathu sokukhathazeka uma iphromoshini ye-SEO imisiwe ngenxa yesizathu esithile. Yize i-Google izosusa yonke i-backlinks kusuka kungobo yomlando yedatha ngenyanga, ama-rankings azohlala esesimweni esithile. Ukuhlelwa kwehla ngeke kube yinhlekelele kangako, ngoba i-FullSEO yenze ibhizinisi layo. Isikhundla se-rankings siyohlala siphakeme kunangaphambilini kokuqhuba umkhankaso. Kunzima ukuthola izindleko zesevisi kusengaphambili: Iphrojekthi ngayinye yecala ngalinye. Intengo ivame ukuqokwa ngemuva kokuthi uchwepheshe we-SEO ahlole iwebhusayithi yakho futhi enze iziphetho ezithile. Noma kunjalo, zonke izindleko zizosuswa ngokuphelele ngenzuzo umkhankaso ozoziletha.
Ukuqoqwa kwedatha yokuhlaziya kungenye yezakhi zokukhiqizwa kwewebhusayithi kwe-SEO. USemalt udlula wonke amasistimu wokuncintisana maqondana nalokho. Isibonelo yinsizakalo ehlolile yokuhlaziywa kwamawebhusayithi - ama- Analytics. Ukucwaningwa kwemali kulandelwa ngokwenziwa kombiko onemininingwane, kubandakanya nokuhlaziywa kwezindawo ezincintisanayo. Amagama angukhiye afanele kakhulu ayaqokwa, futhi kwakhiwa uchungechunge lwemikhiqizo, ngokwesilinganiso sazo. Ngokwesisekelo samagama asemqoka, isisekelo semantic siyalungiswa, esizosetshenziswa ukukhuthaza iwebhusayithi yakho ngokuzayo. Nalu uhlu lwezinhloso ze-Analytics:
Ukuhlaziywa kuqala ukusebenza maduze nje lapho ubhalisa kwiwebhusayithi yethu. Ukuqoqwa kwedatha kwenziwa ngokuzenzakalelayo. Ngokuphothula iqoqo lokuhlaziya, uzonikezwa umbiko ngesikhundla sewebhusayithi yakho enjini yokusesha. Ngaphandle kwalokho, amasayithi encintisana nawo ayahlaziywa, nawo, ngakho-ke uzoba nolwazi lweqiniso ngesimo samanje samawebhusayithi eqembu lesithathu. Kuyinzuzo enkulu. Esiteji sesakhiwo sewebhusayithi, kuzobhekwa wonke amazinga we-SEO, ngakho-ke, ukuhlelwa kwewebhusayithi kuzoshintshwa ukuze kuqhutshekwe ukwenziwa okuhle.
Ukuba ne-akhawunti esemthethweni kukuvumela ukuthi ungeze noma iyiphi inombolo yamasayithi kwikhabhinethi yakho yangasese. Iwebhusayithi ngayinye engeziwe nayo izohlaziywa. Umbiko uzokhombisa yonke imiphumela yokuhlaziywa; kuzocaca ukuthi yimaphi amagama okhiye okudingeka uwasebenzise. Uhlelo luzoqinisekisa ukuthi amagama angukhiye ahambelana nencazelo yokuqukethwe. Ukuhlanganiswa kwalezi zinyathelo ngokungangabazeki kuzoholela ekwandeni okusheshayo kokuya kuwebhusayithi. Ngendlela, ungangeza noma ususe amanye amagama angukhiye ngokuthanda kwakho.
Inzuzo yokukhetha ama-Analytics ukuthi iwebhusayithi ihlaziywa amahora angama-24 ngosuku. Inqubekela phambili yayo ilandelwa ngokucophelela ngisho noma uphumule futhi ungenzi ibhizinisi. Imininingwane mayelana nalabo oncintisana nabo kuzokuvumela ukuthi uthathe isenzo esifanele ngendlela esifike ngesikhathi, uhlale njalo ezikhundleni eziphezulu. Awudingi ngisho ukucabanga ngokuthi yiziphi izinto ezingcono, ama-Analytics azokwazisa okufanele ukwenze. Abantu abaningi basebenzisa i-Application Programming Interface (API), kulula kakhulu ngoba idatha ivumelaniswa ngokuzenzakalelayo, ukuvumela ukuthi uhlale usesikhathini nazo zonke izibuyekezo. Ukuhlaziywa kuhlinzeka ngamaphakheji wemali emithathu; ngamunye wabo unezindleko zakhe. Kunjalo:
USemalt ubuye aphakamise nezinsizakalo zokuThuthukiswa kweWebhu. Uhlelo lolu luhloselwe ukuthuthukisa isiza sezentengiselwano, okubandakanya ukuklama izingxenye zalo. Ngokuqondile - ukuklama, ukuhlanganiswa nezinhlelo zokusebenza zenkampani yangaphandle, kanye nohlelo lokuphathwa kokuqukethwe. Ukunikezwa okwengeziwe ngamamojula we-e-commerce akhethekile nama-API.
Ukwethulwa kwamaphrojekthi amakhulu we-inthanethi yezentengiso kuhlale kubandakanya izikimu ezithile zokukhangisa. USemalt wayelindele leso simo, waphakamisa ukwenziwa kwevidiyo ekhethekile. Ividiyo inomlingiswa wokuphromotha, obonisa zonke izinzuzo zenkampani entsha. Uhlelo lwe- "Promotional Video Production" lungaqaliswa ngezindlela ezimbili: ngethempulethi nangokuthanda komuntu siqu. Kuhlobo ngalunye, intengo yehlukile. Ngokusho kwesipiliyoni sabachwepheshe, ama-50% empumelelo ebhizinisini online akukhombisa ukumelwa okuyikho kwenkampani. Ividiyo yethu inyusa amaphesenti aphezulu empumelelo kakhulu.
Ngakho-ke senze umbono omfushane wenkampani yakwaSemalt, kodwa sikholwe, yithiphu nje ye-iceberg uma uyiqhathanisa nazo zonke izinzuzo inkampani ezingaletha. Ukusebenziseka kwewebhusayithi ye-SEO kungaphezu kokukhethwa kwamagama angukhiye. Isayensi iyonke etholakalayo ngochwepheshe kuphela. Funda izindaba zethu; uzonanzelela ukuthi labo ababezama ukwenza izinto ngaphandle kukaSemalt bebesincenga usizo. Futhi besijwayele ukuzisindisa. Musa ukuchitha isikhathi sakho; esikhundleni salokho, qala ukukhula ngoSemalt, ucebe, futhi ujabule. Silinde wena!